18 April 2021 ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ (C.R.P.H. )ကို ထောက်ခံဆန္ဒပြမှုတခု / ဧရာဝတီ
မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာ စစ်ကောင်စီက အာဏာသိမ်းချိန်က စတင်ပြီး မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ ရှင်သန်မှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်။ ကျမတို့ဟာ ငြိမ်ချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတယ်။ ရပ်ကွက်တွေ၊ မြို့ကြီးတွေ မြို့ငယ်တွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အသက်တွေကို စတေးတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတခု၊ လူမျိုးစုတခု၊ ခေါင်းဆောင်တဦးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတာ မဟုတ်ဘဲ လွတ်လပ်မှုနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေက မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်ခံထားရပြီး ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကျမတို့အနေနဲ့ အခုအခါ တိုက်ရိုက်အကူအညီ ပေးဖို့ တောင်းခံအပ်ပါတယ်။
စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဟာ ကလေးငယ် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ အပါအဝင် လူ ၇၀၀ ကျော်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး လူ ၃၀၅၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီး၊ တရားစွဲဆို၊ ထောင်ချထားပါတယ်။ သူတို့တွေက ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ဆင်ခြင်တုံတရား ကင်းမဲ့စွာ ပစ်ခတ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေကို လုယူခြင်းတို့နဲ့ ဦးစွာ တုံ့ပြန်ပါတယ်။ မကြာသေးမီ ရက်များမှာတော့ သူတို့က အကြမ်းဖက်မှုကို တိုးမြှင့်ပြီး အော်တိုမက်တစ်လက်နက်တွေနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဖေါက်ခွဲပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုလာတယ်။ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ကဆို ပဲခူး တမြို့တည်းမှာတောင် လူ ၈၀ ကျော် ပစ်သတ်ခံရတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းတပ်တွေဟာ ဆေးရုံတွေနဲ့ကျောင်းတွေကို သိမ်းပိုက်ထားပြီး ဘဏ်တွေကို သိမ်းမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်တယ်။ ကျေးလက်ဒေသတွေကို ဗုံးကြဲပြီး အရပ်သားတွေကို ကျောက်လှိုဏ်ဂူတွေထဲနဲ့ ထိုင်းနယ်စပ်တဖက်ကို ထွက်ပြေးစေတယ်။
ဒါဟာ တရားဝင်အစိုးရတခုရဲ့လုပ်ရပ် မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ပြည်သူကို ပြန်ပြီးစစ်တိုက်နေတဲ့ စစ်တပ်တတပ်ရဲ့ လုပ်ရပ်ပဲဖြစ်တယ်။
ဒီလုပ်ရပ်ကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ မျိုးဆက်အားလုံး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအားလုံး၊ ဘာသာတရား အားလုံး၊ လိင်ကွဲပြားမှု အားလုံး၊ ဒေသအားလုံးနဲ့ စီးပွားရေးအုပ်စုအားလုံးက ညီညွတ်ပြီး မြင့်တက်လာတဲ့ ဖိနှိပ်မှုကို ဆန့်ကျင်ဖို့ သူတို့ရဲ့နည်းလမ်းတွေကို ဆက်လက်ပြောင်းလဲသုံးစွဲနေခဲ့တယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းတပ်တွေ အကြမ်းဖက်မှု အရှိန်မြှင့်တင်ပြီးနောက်မှာ ဆန္ဒပြသူတွေက တိတ်ဆိတ်တဲ့ ဆန္ဒပြမှုပုံစံနဲ့ လမ်းမကြီးတွေမှာ လူသူကင်းမဲ့အောင် လုပ်တယ် ဒါမှမဟုတ် သွေးချောင်းစီးတာကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ ဆေးနီတွေ ဖျန်းတယ်။ စစ်ကောင်စီက တနိုင်ငံလုံးနီးပါးမှာ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်လိုက်တော့ရော။ ပြည်သူတွေက အရင်ခေတ်ကလိုပဲ ပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်းတွေကို လူကိုယ်တိုင်ဖြန့်ချိကြတယ်။
ဒီလို အားထုတ်မှုနဲ့ နည်းပရိယာယ်ကြွယ်ဝမှုက ရိုးရှင်းလှတဲ့ အမှန်တရားကို ထောက်ပြနေပါတယ်။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ပြန်သွားတာ မြန်မာပြည်သူတွေက လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အမှန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတခုတည်းကသာ နားမလည်နိုင်တာပါ။
အာဏာသိမ်းပြီး ရက်ပိုင်းအကြာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ (C.R.P.H. )ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ကွဲပြားတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမျိုးစုပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ် ၃၀၀ ကျော်နဲ့ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ (စစ်ကောင်စီကတော့ အာဏာသိမ်းဖို့နဲ့ လွှတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းဖို့ အကြောင်းပြချက်အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမသမာမှုတွေရှိတယ်လို့ အထောက်အထားမဲ့ ပြောဆိုနေပါတယ်။) ဒီကော်မတီမှာ အဖွဲ့ဝင် ၁၇ ဦးပါဝင်ပြီး ၁၅ ဦးက နိုဝင်ဘာလမှာ ကိုယ်စားလှယ်နေရာအများစုရတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဖြစ်ပြီး ကယားပြည်နယ်ပါတီနဲ့ ပလောင်အမျိုးသားပါတီက တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် တဦးစီ ပါပါတယ်။
C.R.P.H. မှာ ဒုတိယသမ္မတယောက်နဲ့ ခေတ္တဝန်ကြီး ၅ ဦးပါဝင်ပါတယ်။ ကျမကိုတော့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်ထားပြီး အဲဒီတာဝန်နဲ့ပဲ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေကောင်စီ အလွတ်သဘောအစည်းအဝေးမှာ ကျမ မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူ ကျမတို့ C.R.P.H. က ညီညွတ်တဲ့ အစိုးရအာဏာကို ထူထောင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ အာဏာခိုင်မာအောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ တားဆီး တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ ဒီရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းဆီက တိုက်ရိုက်အကူအညီကို ကျမတို့တောင်းခံပါတယ်။
စစ်ကောင်စီက C.R.P.H. ကို မတရားသင်းကြေညာထားလို့ ကျမတို့ ပုန်းအောင်းလုပ်ကိုင်နေရပေမယ့် ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ သပိတ်တွေကို ဦးဆောင်နေတဲ့ လူမှုအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့သာမက တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တွေနဲ့ပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
အစိုးရယန္တရားနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ရပ်ဆိုင်းသွားစေတဲ့ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ သပိတ်တွေက စစ်ကောင်စီအတွက် ဘာရင်းမြစ်မှ မကျန်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးလို့ ဒီသပိတ်တွေကို ကျမတို့ ထောက်ခံတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရတာဟာ သာမန်ပြည်သူတွေအတွက် အင်မတန် ခက်ခဲစေပါတယ်။ ဒီပြည်သူတွေကို ကူညီဖို့ C.R.P.H. နဲ့ ဒေသခံ လူမှု အသိုက်ဝန်းများဟာ သူတို့ကို ရေနဲ့အစားအစာ၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား၊ အများပြည်သူ လုံခြုံမှုနဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အာမခံချက်ပေးဖို့ ကော်မတီတွေ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
အရင်စစ်အုပ်စုက ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဖျက်သိမ်းကြောင်း မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှာ C.R.P.H. ကကြေညာခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်ထောင်စု ထူထောင်ဖို့ လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ်ကို အဆိုပြုခဲ့တယ်။ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာ စစ်တပ်ဟာ အရပ်သားကြီးကြပ်မှုအောက်မှာပဲ ရှိရမှာဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေကို ပိုမိုကိုယ်စားပြုတဲ့ စနစ်ဖြစ်တယ်။
ဒီစာတမ်းမှာ ကြားကာလအဖွဲ့အစည်းများ အထူးသဖြင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး ကြားကာလအစိုးရဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရေး စီမံချက်တခုကို ဖေါ်ပြထားတယ်။ ဒီကြေညာစာတမ်းကို မူကြမ်းရေးဆွဲတာဟာ C.R.P.H.၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အမျိုးမျိုး၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လူမှုအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံသစ်အတွက် ရည်မှန်းချက်နောက်မှာ မကြုံဘူးတဲ့ ညီညွတ်မှုတခုကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
ကျမတို့အနေနဲ့ အစိုးရတွေကို အထူးသဖြင့် အိမ်းနီးချင်းအစိုးရတွေအနေနဲ့ C.R.P.H. နဲ့ သူ့ အစိုးရကိုသာလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဝင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်အနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုဖို့နဲ့ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့နည်းပညာ အကူအညီပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေက သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့အခွင့်အရေးအတွက် ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်နေကြတယ်။ အားလုံးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ လုံခြုံရေး အစီအမံတွေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို ထောက်ခံဖို့ ကျမတို့က နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကို တိုက်တွန်းတယ်။
မကြာသေးတဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေက စစ်ကောင်စီရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေး လမ်းကြောင်းတခု အမြန်ဆုံး ဖွင့်ပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်းကို ကျမတို့ တောင်းဆိုတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို လက်နက်တင်ပို့မှုပိတ်ဆို့ဖို့၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ခိုလှုံနေတဲ့ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ လေကြောင်းမပျံသန်းရ ဇုန်များထူထောင်ဖို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံက ကရင်လူမျိုးစုတွေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က ရိုဟင်ဂျာများအပါအဝင် ဘယ်ဒုက္ခသည်ကိုမဆို ကူညီဖို့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို ကျမတို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်အာဏာရှင်စနစ်၊ အထီးကျန်ခြင်းနဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆီ ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့် စစ်ကောင်စီရဲ့ အားထုတ်မှုဟာ သူတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့ခြင်းကို ပြသနေတယ်။ စစ်ကောင်စီမှာ ကိုယ်ကျိုးကာကွယ်ရေး ရည်မှန်းချက်နဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကလွဲလို့ တခြားနည်း မရှိကြောင်းလည်း ပြသနေတယ်။ စစ်ကောင်စီ ကျောထောက်နောက်ခံပြုပါတီဟာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကိုယ်စားလှယ်နေရာ ၄၉၈ နေရာထဲက ၃၃ နေရာသာ အနိုင်ရတယ်။ စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက် ပြည်ပက မြန်မာသံတမန် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာက စစ်ကောင်စီအောက်မှာ အလုပ်မလုပ်လိုကြောင်း လူသိရှင်ကြားကြေညာကြတယ်။ ရဲနဲ့စစ်သား အများအပြားလည်း ထွက်ပြေးကြတယ်။
ပြည်ပက အစိုးရတွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ စစ်ကောင်စီရဲ့ အာဏာငမ်းဖမ်းနေမှုကို ယုတ်လျှော့သွားစေနိုင်ပြီး သူတို့ဝင်ငွေကိုလည်း အကြီးအကျယ် ကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။
စစ်အရာရှိတွေနဲ့ စစ်ကုမ္ပဏီတွေကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုချမှတ်ပြီး နယူးယောက်ရှိ ဗဟိုဘဏ်ကနေ စစ်ကောင်စီက ဒေါ်လာ တဘီလျံ မထုတ်ယူနိုင်အောင် တားဆီးပေးတာနဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရပြန်လာတဲ့အထိ လက်ရှိကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွေ ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အတွက် ဘိုင်ဒင်အစိုးရကို ကျမတို့ကျေးဇူးတင်တယ်။
ဥရောပ သမဂ္ဂကလည်း အာဏာသိမ်းမှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကို အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေ ချမှတ်ခဲ့တယ်။ အကြမ်းဖက်မှုကို ရှုတ်ချတယ်ဆိုတာထက်ပိုပြီး အခုလို လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ဖို့ တခြားအစိုးရတွေကို ကျမတို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေအနေနဲ့ စစ်တပ်ပိုင်ဘဏ်တွေ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ ငွေပေးငွေယူကိစ္စတွေကို ရပ်ဆိုင်းသင့်ပါတယ်။ စစ်အာဏာသ်ိမ်းပြီးပြီးချင်း မြန်မာစစ်တပ်အကြီးအကဲ ကြီးကြပ်တဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်နဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းကို ရုတ်သိမ်းတဲ့ ဂျပန်ဘီယာလုပ်ငန်း Kirin က ချမှတ်လ်ိုက်တဲ့ နမူနာကို ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ သတိပြုမိဖို့ ကျမတို့တောင်းဆိုတယ်။
လွန်ခဲ့တဲအပတ်က ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာ့အရေး အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးပွဲကို စီစဉ်တဲ့အတွက် ဗြိတိန်နိုင်ငံကိုလည်း ကျမတို့ကျေးဇူးတင်တယ်။ အကျပ်အတည်းကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးသံတမန်ဟာ အာရှကို သွားရောက်နေပါတယ်။ အချို့ ASEAN ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း အရေးပေါ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပဖို့ အဆိုပြုကြတယ်။ အဲဒီလို သံတမန်ရေးအားထုတ်မှုတွေမှာ ပါဝင်ဖို့ ကျမတို့ အသင့်ရှိပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီး ၇၃ နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ နေခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့နိုင်ငံကို စစ်တပ်က မပိုင်ဘူး။ ကျမတို့ပြည်သူတွေကပဲ ပိုင်ပါတယ်။
(ဒေါ်ဇင်မာအောင်သည် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတဦး ဖြစ်ပြီး ရန်ကင်းမြို့နယ်မှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီမှ ဖွဲ့စည်းသော အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တာဝန်ယူထားသူ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ The New York Times သတင်းစာပါ How to Defeat Myanmar’s Military ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
Topics: CDM, CRPH, စစ်ကောင်စီ, စစ်အာဏာသိမ်း, ဇင်မာအောင်, တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့, နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး, ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု